Shiinaha S820 Labo-sumadeeyaha wax soosaarka iyo Warshadda | S-conning
S820 waa calaamadeynta wejiga hore iyo gadaal weel oval ama qaab afar geesle ah oo kiimikada maalinlaha ah, cuntada iyo cabitaanka, dawooyinka iyo kuwa kaleba. hubinta dhalooyinka calaamadeynta joogtada ah ee mowqifka saxda ah ee hore; Qalabka hagaajinta suunka sare ee laastikada khaaska ah, si loogu beddelo dhalooyinka cabbirka kala duwan ee hawlgalka oo aad u fudud oo ku habboon Labada istaag - kelinimada iyo hawlgalka khadka tooska ah, Ku darista qaab ikhtiyaar ikhtiyaari ah, calaamadeynta dhalada wareega iyo dhalooyinka fidsan waxaa lagu sameyn doonaa hal mashiin.
• Shaashadda taabashada ee bani-aadamka: Hawlgal fudud oo toos ah, shaqooyin dhammaystiran iyo hawlo caawimaad khadka toosan ah.
Ku labanlaab silsilad leh qalabka wax lagu dhejiyo si loo hubiyo dhexdhexaadnimada dhalooyinka fidsan iyo kuwa laba jibbaaran.
• Qalabka suunka jilicsan ee khaaska ah waa mid adag oo isku mid ah suunka ugu weyn ee qaada si loo hubiyo xasilloonida toosan ee dhalada cadaadinta iyo gudbinta.
• ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo lagu ogaado isha korantada si loo hagaajiyo saxnaanta ogaanshaha.
• Calaamadeynta shaqeynta keydinta halbeegga (waxaad horay u sii kaydin kartaa 50 kooxood oo ah calaamadaha calaamadaha), uma baahnid inaad dib u dhigto markii aad beddelayso dhalada.
• Waxaa lagu qalabeyn karaa aalado ay ka mid yihiin ku duubnaanta birta iyo meeleynta si loo gaaro shuruudaha calaamadeyn dheeri ah ee qaabka dhalada (oo ay ku jiraan ku duubnaanta gariiradda).
• Bixi shaqooyin kala duwan oo lagu ogaanayo, sida ogaanshaha calaamadda calaamadaha, ogaanshaha baxsiga koodhka iyo daabacaadda nuxurka daabacaadda; Dhalooyinka aan caadiga ahayn ayaa laga saari doonaa dib-u-warshadaynta.
• waxaa lagu qalabeyn karaa mashiinka kuleylka kulul, daabacaha kuleylka kuleylka ama daabacaadda koodhka daabacaadda iyo calaamadeynta inkjet.
• Shaqada maareynta calaamadda sirdoonka, howlaha digniinta degdegga ah, nidaamka ogaanshaha muuqaalka ikhtiyaariga ah, iwm.
5 Xawaaraha rarka 5～40meters / daqiiqo
6 Xawaaraha calaamadda dirista 3～50 mitir / daqiiqo
8 Duub calaamadda dhexroorka gudaha：76mm, dhexroor dibadda:350mm
11 Mashiinka Baaxadda Dibadda (mm) Ku saabsan (L)3000mm × (W)1650mm × (H) 1500mm Tixraac kaliya. Fadlan xaqiiji cabirka qorshaha ugu dambeeya
Hore: Nidaamka saliingaha-xawaaraha sare ee S400 & calaamadeynta
Xiga: S-Conning Xawaare Sare oo Lagu Tuuri Karo Saliingaha & Mashiinka Calaamadeynta Nidaamka Sirinjiyeyaasha Prefill
Top Iyo Labeler Labeler, Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Mashiinka Mashiinka Balaastikada, Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha, Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi, Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta,